DAQIIQADII UGU DAMBEEYA | RayHaber | raillynews
Horumarinta Flash ..! Kor u qaadista Munaasabadda Tareenka Korantada Qaranka ee Tareenka ayaa la joojiyay
Munaasabaddii lagu furayay Tareenka Korontada Qaranka, oo laga soo saaray warshadda ku taal Sakarya laguna dhawaaqay 29 May, ayaa la joojiyay. Ka dib markii aqoon-isweydaarsiga jirka ee wax soo saarka aluminium laga furay June 2019, waxay ka bilaabatay wax soo saarka TÜVASAŞ. [More ...]
Ardayda Galeysa Imtixaanka YKS! Imtixaanka Cilmiga tooska ah ee internetka laga helo ee loo yaqaan "MEB"
Imtixaanka ugu horeeya ee imtixaanka qadka ee ardayda loogu diyaarinayo YKS waxaa la qaban doonaa 30ka Meey. Dhamaadka imtixaanka in la qabto 2 kalfadhi, arday walba waxaa la siin doonaa kaarka warbixinta. Qiimeynta gudaha Turkiga, waxay ka dhici doontaa qiimeynta gobollada iyo degmada. [More ...]
1 Bilyan Euro Deegaanka iyo Mashruuca Kaabayaasha ka socda Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka
Wasiirka Deegaanka iyo Magaalaynta Murat Kurum, 25 mashruuc oo ka socda 1 mashruuc oo leh maalgalin qiyaastii 48 bilyan euro ah oo laga hirgalin doono 30 degmo oo hoos imaanaysa Qalabka Midawga Yurub ee Caawinta Ka Hortagga Khibradda (IPA). [More ...]
Khadka taleefanka ee ALO 183 Waxaa Lagu Soo Bandhigay Adeegga Muwaadiniinta
Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk ayaa shaacisay in Khadka Taageerada Bulshada ee 'ALO 183', mid ka mid ah Xarumaha Wicitaanka ee bixiya adeegyada gudaha Wasaaradda, ay sidoo kale adeegyo ku bixin doonaan arjiga Whatsapp. ALO 183 [More ...]
Machadka Great Work to Work wuxuu ka caawiyaa shirkadaha inay taageeraan sumadaha loo shaqeeyaha iyo xoojinta dhaqanka shirkadaha. Marka loo eego xogta machadka, ganacsiyada leh dhaqan aaminaad ayaa leh seddex jeer soo laabashada dhaqaalahooda marka loo eego tartamayaasha. [More ...]
Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay ka shaqeysay nadiifinta Masaajidada dib loo furi doono Jimcaha iyadoo la waafajinayo wareegtada Wasaaradda Arimaha Gudaha. Iyada oo la raacayo wareegtada Wasaaradda Arimaha Gudaha ee Izmir Magaala-weyn, Masaajidada dib loo furi doono cibaadada Jimcaha, 29 Meey. [More ...]
Diyaaradaha dagaalka F-16 ee dagaalka Falcon oo ay leeyihiin Taliska Ciidanka Cirka Turkiga ayaa duqeymo la beegsaday bartilmaameedyo argagixiso oo kuyaal gobolka Asos ee waqooyiga Ciraaq. Bayaanka ay soo saartay Wasaaradda Difaaca Qaranka ee Jamhuuriyadda, ayaa ah Ciidanka Qalabka Sida ee Turkiga [More ...]
Eskişehir OSB U Diyaargarowga Imtixaanka Covid-19
Bayaankooda wadajirka ah, madaxweynaha Eski Presidentehir OSB Nadir K Npeli iyo gudoomiye ku xigeenka Metin Saraç waxay cadeeyeen inay diyaar u yihiin tijaabooyinka Covid-19 in lagu sameeyo Eskişehir. Tilmaanta; Sawirka 'Covid-19 scan', oo ka bilaabmay OIZs gudaha Kocaeli iyo Ankara, [More ...]
Canshuurta Isweydaarsiga Dibadda: Caddadka canshuurta ee lagu dabaqay isweydaarsiga shisheeye iyo ka ganacsiga dahabiga ayaa la kordhiyay. Sida ku xusan go’aanka lagu daabacay Gazette rasmiga ah, sicirka Caymiska Bankiga iyo Canshuuraha Macaamilada (BITT) ee lagu dabaqay macaamil sarrifka lacagaha qalaad wuxuu ka socdaa 2 kun. [More ...]
Buundooyinka miyaa lacag la'aana markay yimaadaan iidda? Buundooyinka iyo jidadka-jidadka ma xor baa fasax maalmaha ciidaha? waxay bilowday inay baarto. Ramadaanka, wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka waa bilaash. Kala-guurka illaa Arbacada, Meey 27, 07.00:XNUMX [More ...]
In kasta oo dalka oo dhan laga soo bandhigayo xilligii Ciidul Fitriga, kormeer adag ayaa laga hirgalin doonaa jidadka waaweyn. Intii lagu gudajiray Ramadaanka, wadar ahaan 18 564 oo taraafikada ah ayaa ka shaqeyn doona booliiska iyo Gendarmerie maalin kasta, halka booliska iyo [More ...]
Wareegtada ay Wasaaradda Arimaha Gudaha u dirtay 81 Goballada Gobollada, nooc cusub oo coronavirus ah (Covid 19) gudaha baaxadda tallaabooyinka uu qaaday Agaasinka Arimaha Diinta si looga hortago faafitaanka Turkiga; Laga soo bilaabo 16-ka Maarso 2020 [More ...]
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Bekir Pakdemirli, waaxda ugu weyn ee Beeraha Turkiga ee ku taal Sanliurfa Ceylanpınar Farm 60 hektar oo biyo ah, kuwaas oo keeni doona maalgashi, ayaa maanta la furay. Wasiirka Pakdemirli [More ...]
Dhoofinta alaabada caanaha iyo caanaha ayaa loo furay Shiinaha
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan ayaa sheegay in Turkigu kor u qaaday caqabadaha dhoofinta caanaha iyo waxyaabaha caanaha laga sameyn doono Shiinaha. Wasiir Pekcan ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay, halkaasoo ay ku yaalliin Wasaaradda Ganacsiga iyo Wasaaradda Beeraha iyo Dhirta [More ...]
Turkiga waa dalxiiska ugufiican adduunka iyo abaalmarinta deegaanka ee Calanka Buluugga ah ee sanadkan ayaa sii haysay kaalinta ugu sarreysa. Spain iyo Griiga kadib wadamada 3-aad ee aduunka oo leh calanka buluugga ah ee Turkiga ugu badan [More ...]
Zehra Zümrüt Selçuk, Wasiirka Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, ayaa sheegtay in gunnooyinka dheeriga ah ay yihiin 52 maalmood oo la daabacay laba jeer sanadkii oo lagu bixiyo laba qaybood. [More ...]
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga ee Içiii, Taliyaha Guud ee Ciidamada Gendarmerie iyo cutubyada Taliska Ilaalada Xeebaha ee dalka guud ahaan Turkiga Codsiga Nabadda ee Kalsoonida ayaa isku mar la qabtay May 21 08.00-24.00. Ficil ahaan, Ramadaan [More ...]
Marka la eego baaxadda tallaabooyinka coronavirus, duullimaadyada YHT waxay ku bilaaban doonaan hab xaddidan laga bilaabo Juun 1deeda. Marka la eego cabbirista coronavirus, duullimaadyada YHT waxay bilaaban doonaan 1-ka Juun 16 duullimaadyo labada dhinac ah. Ankara-Istanbul, Istanbul-Ankara, Ankara-Eskisehir, Eskisehir-Ankara, Ankara-Konya, Konya-Ankara, Konya-Istanbul, [More ...]
Madaxweyne Erdoğan wuxuu baaritaano ka sameeyay Başakşehir Çam iyo Isbitaalka Magaalada Sakura kahor xaflada. Helitaanka macluumaadka maamulada, Erdogan, Wasiirka Caafimaadka Dr. Fahrettin Koca waxaa weheliyay dad kale oo danaynaya. Khudbadiisi xaflada furitaanka, Jabaan [More ...]